nyticsynymalagasy [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/c/c960a5f5efba11fb5221944b74889ac4.xhtml failed
Lohahevitra : Ny TIC sy ny Malagasy
1.Izao manko ny tena olana ankehitriny anie:
2. Tsotra ny filana:
3. Ara-teknika dia azo atao dia azo atao tokoa ny vinavina, satria :
4. Izao ilay resaka:
Desambra 2004 Mpanoratra : Tambanivohitra.com
Tsy resaka teknika rano fotsiny no mba tiako hatao lohahevitra eto indray, fa fijery raika fotsiny hoe: “ahoana marina no fomba hitondrana ity TIC ity, mba ho an’ny rehetra e (na marimarina kokoa hoe hahazoan’ny maro ny tombotsoa aminy)!”.
- ny teknisianina toa ny maro eto amin’ny sehatra dia liana dia liana ary mazoto tokoa homana ny zava-maro be, teraka etsy sy eroa mikasika ny vokatra TIC, ary dia samy mahazo izay ilaina ny rehetra araka ny filana mipoitra avy amin’ny tsirairay avy. Tsara dia tsara ary masaka tsara daholo izay hevitra teknika na vokatra TIC mipoitra; tsapan’ny teknisianina rehetra izany, saingy ny tsininy dia hita fa faritra kely boribory ihany no hahatsapa izany: isika teknisianina ihany!!!
- ny saram-baben’ny gasy maro an’isa anefa dia hita avy hatrany fa “mijery floara” (araka ny fiteny io) daholo amin’ity zava-malaza atao hoe TIC ity ankehitriny. Ny cyber izao no manomboka efa kobon’ny maro fa mitondra zava-maro mahaliana tokoa (ohatra malaza enkehitriny aty aminay : fitadiavana vady), fa milaza aminareo aho fa na ny tsy manana CEPE ary misy aza tsy mahay mamaky teny, miditra cyber de mba mi-TIC ihany koa !!!... Vokany, raha aty aminay aloha dia TIC mira Cyber, ho an’ny sarambaben’ny olona, ary ny “corollaires”-n’izay fahatsapana izay dia loza, satria ho an’ny PMI sy PME izay antenaina sy amporisihina mba hi-TIC koa amin’ny sehatrasa misy azireo dia toa azon-kevitra fa tsy dia misy ilain-dry zareo ilay TIC izany amin’ny asany !!! ...
De eo isika mianakavy no raisina, fa tsy vitan’ny “fracture” eo amin’ny tany mahantra sy ny tany matanjaka ihany no hisy, amin’ity TIC ity; fa dieny izao koa dia hisy sahady ilay fahatapahana eo amin’ny “teknisianina TIC”-ny tany mahantra sy ny sarambaben’ny olona amin’ny tany mahantra.
Izay ilay fampidirana olana.
Fa izao ny ahy aloha no mba tena nahatarika ny saiko hatry ny ela amin’izy ity.
Raha nisy “developpement rapide” aloha ny sehatra ekonomika eran’izao tontolo izao tao anatin’izay 10 taona farany izay dia ity sehatra TIC ity. Fa tena inona ary ny nahatonga izany ???... Raha jerena akaiky dia ho tsapa fa tena ala-olana TEKNIKA rano fotsiny, ary fitsipim-pikarohana matotra sy akaiky olana tokoa no nahatonga izany ! Ary indrindra ho tsapa koa fa ireo gaigilahy mahaleo-tena teo amboalohany amin’izy ity no toa tena nivoahan’ireo “tselatra” nivoahana tamin’ny olana toa noeritreretina hatrany ho tsy tafavoaka. Tadidiko ny fotoana nilokalokan’i IBM fa tena tapi-dalan-kaleha amin’ny fahefa-miasany ny bus ISA fa dia ity ny MCA (nindramina tamin’ny “gros systeme”-ny ihany) vaha-olana maharitra amin’io, tsy nanaiky izany anefa ny maro fa dia izao nanaraka ny PCI izao; ary tsy nanary avy hatrany ny ISA koa !!! ... ry Krosoft izay nanantena fa ho tafiditra ao anaty “entonnoir”-ny daholo ny rehetra amin’ny alalan’ilay OS-ny be mpampiasa, dia voatery manao dia mianotra tsikelikely amin’ny strategia be vinany sao hipitsihan’ny maro eo koa !!!... Aiza ny anatra amin’izany ?
Fehiny amin’izay kozy izay aloha dia hitako, fa anisan’ny lalana tsara dia ny fisokafana amin’ny hevitry ny maro tsy an-kanavaka no tena mahomby, ary izay no tena mampivoatra io sehatra io toa izao !!... Ary hitako fa soa fianatsa amin’ny sehatra maro io, eny fa na dia tsy sehatra TIC aza !!.
Ohatra iray: izaho dia mpanaraka ny fivoaran’ny ASF (Apache Sotware Foundation) hatry ny ela, indrindra ny Jakarta Project izay ao anatiny (ny tena moa azon’ny ody fitian’ny Java rahateo). De tsapako fa maro tokoa ny orinasa ao amin’ny sehatra TIC, eran’izao tontolo izao, no velona tsara amin’ny fanovozana hevitra sy fitaovana avy amin’ny vokatra azo amin’ny toerana toa ireny...
Ny tena nanaitra ahy mantsy aloha rey namana isany dia nisy “flash back” tao amin’ny RTA izay narahiko vao vetivety; mpandraharaha tanora ilay olona (tsara tarehy aloha izy e !). Tsara koa ilay interview, fa ny tena nampitroatra ahy dia ilay toa milaza kely tao hoe “ny tantsaha aloha dia tsy hita izay ilainy ny TIC izao " ... OAY leaza ah !! de ahoana zany zahay Tambanivohitra ... Tsy lasa kosa zany e. Io mantsy ilay koziko tary amboalohany hoe diso fandraisana ireo PMI/PME amin’ity resaka TIC ity !!.
Ny ahy mantsy izao ny fitjeriko, marina fa ilay tantsaha dia sarotra be ny mba hi-TIC-keny koa, toa ireo mpitety cyber aty an-tanan-dehibe, fa ny tsy azo lavina kosa dia tena ilain’izireo dia ilain’izireo tokoa ny vaha-olana mety hoentin’ity TIC ity eo amin’ny sehatrasan’izireo.
Koa resaka teknika moa ny eto, ary satria misy ny resy lahatra fa tsy ilaina any an-tsaha any hono ny TIC, dia zahay kosa mi-kozy hoe alefanay any io !!... Tsy olana na tara be tsy araka ny nampoizina aza, fa ny tanjona dia izay aloha.
- Avoahy ho fantatry ny maro tsy hita isa ny momba azireo indrindra ny toe-karena = asehoy tranonkala
- Mivantana any amin’izireo avy hatrany fifandraisana fa tsy mivilivily = Izay manana telephone afaka mitondra “donnees” amin’ny 4 Kbauds de efa ampy. Ary solon-tsaina raika isaky ny tanana de ampy fa tsy mila atao be. Raha mba vita ihany moa ny bakybaonina izany lasa resabe tato ho ato dia vao maika masaka be (indrindra ireo “derniers kilometres” : toa tsy misy mikojy io !).
Zavatra roa ireo ny tanjona aloha, fa ny sisa hanaraka eo ihany.
Ka eo zany ry zalahy no anisan’ny “defi” hapetraky ny teknisianina (tsy fantatro aloha raha misy miombon-kevitra aminay ny maro). Amin’izy ity dia efa hita taratra daholo ny lalana hitondrana sy hametrahana ilay zavatra, fa ny tena olana goavana dia ny hoenti-manana ny fanapariahana tsy maintsy hatao no “indro kely” hoy ny mpandrafitra; izahay aty an-toerana koa moa efa zatra ny tsy inoan-teny ka tsy “quoi” zany, fa aleo revena milamina ihany ilay izy !
- ny tranonkala de efa mipetraka
- ireo fika praograma rehetra dia efa hita daholo ny hampiasaina ary tsy mila miala vola be ny fampiasana azireo. Hapetraka atsy ho atsy ny safidy hapetraka maharitra, satria hatramin’izay dia confection-maison no nampiasaina:
Ny fitantanana ny fitehirizana (BDR) dia amin’ny alalan’ny Hibernate no horaiketina, satria io dia tsy mifidy karazana fa mety avokoa izay ananana rehetra (MySql, Oracle, SQL Server,PostgreSql, sns ...).
Ny ao ampovoany dia ireto avy no horaiketina sy hampiasaina (Apache Tomcat, J2SE/J2EE sy ny POJO, Hivemind, XML-RPC, Java FTP, sns ...). Manampy ireo moa dia ny famoronana vainga madinika mifanentana amin’ny zava-misy aty amintsika no tena zava-dehibe koa, amin’ny karoka rehetra ...
Ireo aloha no tena fototra, fa ny mikasika ny fanehoana (presentation) kosa dia manantena izahay fa hisy namana afaka hanampy amin’izany atsy ho atsy, satria tena ilaina tokoa ny mba ho tsara ny amin’io lafiny io; resaka taratra ety ivelany mantsy zava-dehibe tokoa amin’ny lafiny fisarihana mpanjifa !
Farany, satria tena efa lava be ilay kozy zany:
De mba hanandrana hampihatra koa zany izahay ity atao PPP ity ka asa raha hahomby.
- Izay olona mpandraharaha vonona hanampy ara-bola amin’io tanjona io dia izao ny ho fifanarahana; omenay bojo ireo vokatra TIC hitanay sy nahitanay fampiharana mahomby, mba ho ampiasin’izireo koa amin’ny TIC-ny (efa nisy nanandramana izany, ary mahomby tokoa, satria tsy lany vola be ry zareo tsinona kah !). I ra-Fanja, mantsy tsy dia hainay loatra ny heviny (revo pilitika loatra angamba !), na dia efa maro aza ny ezaka fanantonana natao, ka aleo itadiavana fika hafa indray. Izy ity mantsy avy amin’ilay hoe: “ny hevitra be dia be ry zandry, fa ny paosy no goaka e !”.
Izay no lavabe, fa dia samia ho tahin’Andriamanitra daholo e
Marina fa mety lasa kozy “wawa” ny toa ity lohahevitra ity, fa ny anay aloha eto ny tiana hampitaina dia tena resaka fotom-pisainana teknika ho entina hampihariny amin’ny fitadiavana vaha-olana resaka ekonomika.
Haneho hevitra ao @ Forum
nyticsynymalagasy.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43